ससफो नेपालका उम्मेदवारहरू झापाको स्थानीय तहमा को-को छन्? | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
ससफो नेपालका उम्मेदवारहरू झापाको स्थानीय तहमा को-को छन्?
दमक, ५ असार । कमल गाँउपालिका प्रमुखमा जित बहादुर राई ‘जितेन’ उपप्रमुखमा पुष्पा लिङदेन त्यसैगरी वडा अध्यक्षहरूमा ४ नम्बर वडा अध्यक्षमा विवेक राई, वडा नम्बर ५ दिवाकर राई, वडा नम्बर ६ मा अर्जुनदेव राई र वडा नम्बर ७ मा चन्द्रिका लावतीलगायत विभिन्न पदमा २१ जनाको उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ । गौरादह नगरपालिकामा नगर प्रमुख खसुरधन राई ‘केडी’ उपप्रमुखमा हेमसरी राजवंशीलगायत विभिन्न पदमा १० जनाको उम्मेद्वारी परेको छ ।
गौरिगञ्ज गाँउपालिका अध्यक्षमा बद्री यादवको उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ भने वडा अध्यक्ष पदमा वडा नम्बर ५ मा विष्णु राजवंशी, वडा नम्बर ६ मा गोविन्द नारायण शाहलगायत उम्मेद्वार छन् ।
झापा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरी ससफो नेपालको तर्फबाट गाउँपालिका उप–प्रमुखमा गौरी राजवंशीको उम्मेद्वारी रहेको छ ।
बाह्रदशी गाँउपालिका प्रमुखमा रंगलाल राजवंशीको उम्मेद्वारी रहेको छ ।
भद्रपुर नगरपालिका नगर प्रमुखमा शतरुधन चौधरी र उपप्रमुखमा शर्मिला आङदेम्बे रहेका छन् । वडा नम्बर १ को वडा अध्यक्षमा नरबहादुर भुजेल, वडा नम्बर २ मा अरुणकुमार लिम्बू, वडा नम्बर ४ मा मनकुमार राजवंशी, वडा नम्बर ५ मा रामबाबुप्रसाद गुप्ता, वडा नम्बर ६ मा राजेश गुप्ता, वडा नम्बर ७ मा छत्रबहादुर राई, वडा नम्बर ८ मा सुप्रिया राई, वडा नम्बर ९ मा मेनुका निङलेखु, वडा नम्बर १० मा रामप्रसाद पौड्यालले वडा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार छन् । भद्रपुर नगरपालिकामा ससफो नेपालका २९ जना उम्मेद्वार रहेका छन् ।
अर्जुनधारा नगरपालिका नगर प्रमुखमा सिर्जलाल चौधरीसहित ६ जनाको उम्मेद्वारी रहेको छ ।
विर्तामोड नगरपालिकामा नगर प्रमुखमा पदमबहादुर तामाङ र उपप्रमुखमा चिजा राईको उम्मेद्वारी रहेको छ । ससफो झापा सचिव सुशील राईका अनुसार विर्तामोड नपामा १७ जनाले पार्टीका तर्फबाट विभिन्न पदमा उम्मेद्वारी दाखिला गरेका हुन् ।
मेचीनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुखमा इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र उप–प्रमुखमा अग्निमाया मेचे रहेका छन् भने १,२ र ३ वडा छाडेर अन्य वडाहरूमा उम्मेद्वारी परेको छ । ससफो झापा अध्यक्ष धिरेन लावतीका अनुसार मेयर, उपमेयरसहित ३२ जनाले उम्मेद्वारी दिएका हुन् ।
त्यस्तै कचना कवल गाउँपालिका प्रमुखमा मञ्जु राई र उपप्रमुखमा भरत राजवंशी रहेका छन् । त्यस्तै बुद्धशान्ति गाँउपालिका प्रमुखमा हरिनारायण चौधरीसहित ससफो नेपालका ४ जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन् ।
त्यस्तै शिवसताक्षिमा मेयर र उपमेयरसहित ६ जनाले ससफो नेपालका तर्फबाट उम्मेद्वारी दिएको बताइएको छ ।
2 Comments for “ससफो नेपालका उम्मेदवारहरू झापाको स्थानीय तहमा को-को छन्?”
OaE7MB May I simply just say whatarelief to find someone that truly understands what they
March 21, 2018 - 2:22 pm